October 2017 – myanmar news
​နေ့စဉ် ဂျင်းစားသုံးရင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ
ဂျင်းစားရင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးသိထားကြပါတယ်။ မိရိုးဖလာဆေးစွမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ လည်း ဂျင်းကို စားသုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ အာနိသင်တွေ ဂျင်းက ပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာ ကြည့်ရအောင်နော်။
သင်ဟာ ဂျင်းကိုစားဖို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ဂျင်းရဲ့ မယုံနိုင်လောက်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ကြည့်သွားသင့်ပါတယ်နော်။
၁။ ဂျင်းက လူ့နှလုံးသားနဲ့ သူငယ်ချင်းပါ။ ဂျင်းက ကိုလက်စထရောကို ကျစေပါတယ်။ လေဖြတ်တာ၊ ဂေါက်ရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါအတွက် အဓိက စားသင့်တဲ့ အစားအစာပါနော်။
၂။ ကိုယ်တွင်း အပူချိန်ကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ဂျင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Antioxidant ကြွယ်ဝတာကြောင့် ဂျင်းစားပေးခြင်းဖြင့် အအေးမိချင်း ဖျားနာခြင်းတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက်မဟုတ်ရင်တောင် အခန့်မသင့်လို့ အော့အန်ခြင်းအတွက် ဂျင်းကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
၄။ ရုတ်တရက် အစားမှားလို့ ဝမ်းလျောခြင်းတွေအတွက်လည်း ဂျင်းကိုစားပေးခြင်းဖြင့် ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
၅။ ဝိတ်လျော့သူတွေအတွက် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ကျစေပါတယ်။ ဂျင်းက အစာချေဖို့အဓိက လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဂျင်းပြုတ်ရည်သောက်ခြင်း၊ ဂျင်းကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ကယ်လိုရီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကို အမြန်ကျစေပါတယ်။
အပိုဆောင်းအနေနဲ့ ဂျင်းစားခြင်းက သင့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးသုခကို မြင့်မားစေပြီး အသက်ရှူကျပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသေးတယ်။ အိပ်ရာမဝင်ခင် ဂျင်းစားခြင်းကလည်း ကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်စေပါတယ်နော်။
Author admin 1Posted on October 31, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​နေ့စဉ် ဂျင်းစားသုံးရင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ
အမျိုးသမီးတွေအတွက် မျက်နှာအဆီပြန်ခြင်းက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနေ သွေးဆုံးချိန်ထိအောင် ကြုံတွေ့နေကြပါတယ်။ အဆီပြန်လွန်းပါက အသားအရေကို အလွန်ပြောင်ပြီး ချွဲကပ်စေပါတယ်။ အဆီပြန်ချင်းကို လုံးဝပြောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ဖို့တော့မလွယ်လှပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ထိန်းသိမ်းဖို့နည်းလမ်းလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
• အဆီပါဝင်မှုများတဲ့မိတ်ကပ် skin care တွေကိုရှောင်ပါ။ အဆီပြန်သူတွေအနေနဲ့ moisture ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေက အဆီပြန်ခြင်းကို ပိုမိုအားပေးပါတယ်။ ရေဓာတ်ပါဝင်နှုန်းများတဲ့ skin care နဲ့ cosmetic တွေကို အသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။
• အဆီပြန်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေက အရေးအကြောင်းတွေ တော်ရုံမဖြစ်ဘူးဆိုတာ အမြဲမမှန်ပါဘူး၊ မျက်နှာအရေပြားအထူအပါးပေါ်မူတည်ပြီးမှသာ အရေးအကြောင်းတွေက နည်းများဖြစ်တတ်တာပါ။ ဒါကြောင့် အဆီပြန်တဲ့အသားအရေကို ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်နော်။
• စိတ်ဖိစီးမှု stress တွေက အဆီပြန်ခြင်းကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အသက်ကိုဝအောင်ရှူပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို နည်းအောင် တရားထိုင်တာ၊ ယောဂကျင့်တာတွေ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်နော်။
• မျက်နှာကို ညအိပ်ရာမဝင်မီ လက်ထိပ်လေးတွေနဲ့ နှိပ်နယ်ပေးပါ အဆီပြန်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
• အဆီမပါတဲ့ အောက်ခံမိတ်ကပ်ရည်တွေကို သုံးပါ။ ခရင်မ်ပုံစံထုတ်ထားတဲ့ မိတ်ကပ်မျိုးကို လုံးဝရှောင်ပေးပါ၊ ဘရပ်ရ်ှနဲ့လိမ်းရတဲ့ ပေါင်ဒါပုံစံမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
• မျက်နှာကို ခြောက်သွေ့စေမယ့် မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးနှင့် မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာတွေကိုရှောင်ပါ။ ဒါတွေက သင့်အသားအရေခြောက်သွေ့မှုထက် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေလို့ ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်။
• အဆီပြန်လွန်းတာကြောင့် မျက်နှာကိုလည်း ဆပ်ပြာတွေနဲ့ ခဏခဏသစ်တာမျိုးကို ရှောင်ပါ။
• အဆီစုပ်စက္ကူတွေအသုံးပြုခြင်းကိုလည်းရှောင်ပေးပါ။ အဆီပြန်ခြင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်နော်။
Author admin 1Posted on October 31, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​အဆီပြန်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သိဖူးတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ အတော်ကွဲလွဲနေ၍ ဗဟုသုတ အသစ်အနေနဲ့ “မ” လာသည်။
မြစ်များရန်ကုန်မြို့ကို လက်မွန်မဆွ တည်ထောင်ခဲ့ကြသူများမှာ မွန်လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဒဂုံဟု သမုတ်ခဲ့ကြသော်လည်း ၁၇၅၅ ခုနှစ်တွင် အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျက ဤအရပ်ကို အခြေပြု၍ ရန်သူ အားလုံးကို အကုန်အစင် တိုက်တော့မည် ဟူသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရန်ကုန်ဟု အမည်တွင်စေခဲ့သည်။ ( အချို့ကလည်း ရန်အပေါင်းကုန်စင်သော အထိမ်းအမှတ် ” End of Strife” အဖြစ် မှည့်သည်ဆို၏။)
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ရန်ကုန်မြို့သည် ရှေးကျသောခေတ်အဆက်ဆက်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်ကိုမူ ၄င်း၏ မြို့နယ် အမည်များကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပေသည်။
ဥက္ကလာပမင်းကြီး အုပ်စိုးစဉ်က သမင်ခေါင်းနှင့် လူကိုယ်ရှိသော သတ္တ၀ါဆန်း “မောင်မင်္ဂလာ” ကို အစွဲပြု၍ ခေါ်သောနာမည် ဖြစ်သည်။
မွန်အမည် ကမာ နှင့် ရွတ် ကို ပေါင်းထားသော နာမည်ဖြစ်သည်။ ကမာ ဆိုသည်မှာ ရေကန် ဖြစ်ပြီး ရွတ် ဆိုသည်မှာ ရတနာ ဖြစ်ကာ အင်းလျားကန်ကြီးကို အစွဲပြု၍ ခေါ်သောနာမည်ဖြစ်သည်။
မွန်လူစွမ်းကောင်း မောင်ကံ ရွှေတိဂုံဘုရား ဆံတော်ကို ခိုးယူရန်လာစဉ် ရွှေတိဂုံစေတီကို ကြည့်လျှင် မြင်နိုင်သော နေရာကို ရောက်ပြီဟူသည်ကို အစွဲပြု၍ ခေါ်သောနာမည်ဖြစ်သည်။
တပုဿ နှင့် ဘလ္လိက ကုန်သည်ညီနောင်နှစ်ဦး မြတ်ဗုဒ္ဓဆံတော်ကို ပင့်တော်မူလာစဉ် ဥက္ကလာပမင်းကြီးက ဗိုလ်ခြေတစ်ထောင်ဖြင့် ဆီးကြိုခဲ့သည် ကို အစွဲပြု၍ ခေါ်သော နာမည်ဖြစ်သည်။
ပုစွန်တောင် နာမည်တွင်မူ မှတ်တမ်းနှစ်ခု ကွဲလျက်ရှိသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီကို တင်သော ပန်းများ စွန့်ရာ အရပ်ဖြစ်၍ ပန်းစွန့်တောင် ဟု ခေါ်ရာမှ ပုစွန်တောင် ဖြစ်လာသည် ဆိုသည်နှင့် ပုစွန် လက်မသဏ္ဏာန် တောင်ကုန်း ရှိသောကြောင့် ခေါ်သည် ဆိုခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
ရွှေတိဂုံစေတီသို့ လာရောက်ဖူးမြော်သော ဘုရားဖူးပြည်သူတို့ ၏ လှည်းများ စတည်းချရာ အရပ်ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် ခေါ်သော နာမည်ဖြစ်သည်။
မင်းနန္ဒာ နှင့် ငမိုးရိပ်မိကျောင်းတို့ကို မလက်တိုမိကျောင်းမက အုပ်စုဖွဲ့ အလစ် တိုက်ခိုက်၍ ပြေးမိပြေးရာ ၀င်တိုးမိသော ချောင် ကို အစွဲပြု၍ ခေါ်သော နာမည်ဖြစ်သည်။
အဂ္ဂိရတ် ထိုးရာတွင် အသုံးဝင်သော ဗဟန်းကျောက်များ ပေါများစွာထွက်သည်ကို အစွဲပြု၍ ခေါ်သောနာမည်ဖြစ်သည်။ ( ဗဟန်း ကျောက်သည် ပြာနှမ်းနှမ်းအရောင်ရှိပြီး အဂ္ဂိရတ်ဆရာများ တန်ဖိုးထားသော ကျောက်ဖြစ်သည်)
သင်္ဃန်းပင်များ ထူထပ်စွာပေါက်ရောက်သော ငမိုးရိပ်ချောင်းကမ်းပါးမှ မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆူးလေချုံများ ထူထပ်စွာ ပေါက်ရောက်သော အရပ်ဖြစ်၍ ခေါ်သော နာမည်ဖြစ်သည်။
Author admin 1Posted on October 31, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on ရန်ကုန်မြို့မှမြို့နယ်အချို့၏နာမည်ရင်း
ဗုဒ္ဓဘာသာ သင်္ဃာန်းအားခြုံ ၍ သာသနာငြိုး နွမ်း‌အောင်‌ ဆူပူရမ်းကား‌ဆဲဆို‌အော်‌ဟစ
‌ ထွန်း‌မောင်‌‌ချေ (ဘ)ဦးဝင်း‌မောင်‌(သ)၃၆.နှစ်‌မှ
ဗုဒ္ဓဘာသာ သင်္ဃာန်းအားခြုံ ၍ သာသနာငြိုး နွမ်း‌အောင်‌
ဆူပူရမ်းကား‌ဆဲဆို‌အော်‌ဟစ်‌‌နေပါသဖြင့်‌ ဒလမြို့ နယ် ၊​
ကျန်စစ်သားရပ်‌ကွက်‌အုပ်‌ချုပ်‌‌ရေးမှူးမှ တရားလိုပြုလုပ်‌ပြီး
Credit. Zaw Myo
Author admin 1Posted on October 31, 2017 October 31, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on ဗုဒ္ဓဘာသာ သင်္ဃာန်းအားခြုံ ၍ သာသနာငြိုး နွမ်း‌အောင်‌ ဆူပူရမ်းကား‌ဆဲဆို‌အော်‌ဟစ
​”ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကြေးမုံသတင်းစာတိုက်တွင် ငွေကိုင်တာဝန်ခံမှ အလွဲသုံးစားပြုရန် ရည်ရွယ်၍ မီးရှို့ခဲ့မှုဖြစ်ပွား”
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် (၅၂)လမ်း
ထောင့်၊ အမှတ် (၇၇)ရှိ ကြေးမုံ သတင်းစာတိုက် မန်နေဂျာရုံးခန်းတွင်
မီးလန့်မှုဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်စဉ်အမှန်မှာ ငွေအလွဲသုံးစားပြုရန်
ရည်ရွယ်၍ မီးရှို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေ ၁၈း၀၀ အချိန်ခန့်က
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိကြေးမုံသတင်း စာတိုက် မန်နေဂျာရုံးခန်းတွင်
မီးခံသေတ္တာမှာပွင့်လျက် အတွင်းရှိ ပီနံအိတ်ဖြင့်ထည့်ထားသည့်
နေ့စဉ်ဝင် ငွေများမီးလောင်ကျွမ်းနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် မီးအားဝိုင်းဝန်း
ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ပြီး ပုဇွန်တောင်မြို့မရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားခဲ့၍
အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ
က သွားရောက်စစ်ဆေးရာ မီးခံသေတ္တာသော့မှာ ငွေကိုင်တာဝန်ခံ
ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း (၅၉)နှစ်၊ တစ်ဦးတည်းသာ ကိုင်ဆောင်ထားကြောင်း ၊
မီးခံသေတ္တာအတွင်းတွင် ငွေ(၈၅၈၅၇၅၃၀)ကျပ် သိမ်းဆည်းထားကြောင်း၊
မီးလောင်ကျွမ်းထားသည့် ပီနံအိတ်အားစစ်ဆေးရာ သတင်းစာစက္ကူ
အဟောင်းများ၊ ငွေစက္ကူပုံသဏ္ဍန် ပြုလုပ်၍ သားရေကွင်းစီးထားသော
သတင်းစာစက္ကူဖြတ်စများ၊ တစ်ဝက်တစ်ပြတ် မီးလောင်ကျွမ်းနေသည့်
(၅၀၀)ကျပ်တန် ငွေစက္ကူအဟောင်း (၁၀)အုပ်ခန့်၊ အခန်းအတွင်း ဓာတ်ဆီ
လောင်း၍ မီးရှို့ရာတွင် အသုံးပြုသော ဓာတ်ဆီများထည့်ထားသည့်
ပလတ်စတစ်ဘူးအားတွေ့ရှိရသည့်အပြင် ငွေကိုင်တာဝန်ခံ ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း၏အခန်းအတွင်းမှ (၅၀၀)ကျပ်တန် ငွေစက္ကူ(၆)အုပ်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့က ဖြစ်စဉ်အပေါ် အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ရရှိရေး
အတွက် စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ မီးလန့်မှုမှာ ၀ါယာရှော့ဖြစ်၍ မီးလောင်ကျွမ်း
ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ငွေကိုင်တာဝန်ခံမှ ၎င်းထံအပ်နှံထားသည့် ငွေများကို
အလွဲသုံးစားပြုရန် ရည်ရွယ်၍ မီးရှို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ရရှိသည်။
အဆိုပါအမှုကို ပုဇွန်တောင်မြို့မရဲစခန်း(ပ) ၂၆၀/၂၀၁၇ ရာဇသတ်ကြီး
ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၉/၄၃၆ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူခဲ့ပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေး
Author admin 1Posted on October 31, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​”ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကြေးမုံသတင်းစာတိုက်တွင် ငွေကိုင်တာဝန်ခံမှ အလွဲသုံးစားပြုရန် ရည်ရွယ်၍ မီးရှို့ခဲ့မှုဖြစ်ပွား”
ကလေးသူငယ်များအား နှောင့်ယှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ မဖွယ်မရာပြုမူခံရခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်
၁။ သမီးမိန်းခလေးများအား မိမိဖခင်မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အမျိုးသား၏ ပွေ့ချီခြင်း၊ ရင်းနှီးစွာ ကိုင်တွယ်ခြင်းကို မခံရန်သွန်သင်ပါ။
၂။ မိမိသားငယ်သမီးငယ်များ၏ရှေ့တွင် မိမိကိုယ်ခန္ဓာပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့်
၃။ အခြားသူတဦးဦးမှ မိမိသားငယ်သမီးငယ်အား “ငါ့ယောက်ျား(သို့) ငါ့မိန်းမ”ဟု ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုခြင်းကို တားဆီးပါ။ ထိုသို့စနောက်ခွင့်မပြုပါနှင့်။
၄။ ကလေးများအတူတူကစားနေသည်ကို လစ်လျူရှုမထားပါနှင့်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ အကဲခတ်၍ ကြည့်ပါ။ ကလေးများအချင်းချင်းလည်း မဖွယ်မရာနှောင့်ယှက်ပြုမူခြင်းများရှိတတ်သည်။
၅။ ကလေးငယ်မနှစ်သက်သောသူ တစ်ဦးဦးထံ အတင်းသွားစေခြင်း၊ အတူနေစေခြင်း မပြုပါနှင့်။ ဆန့်ကြင်ဖက်လိင်လူကြီးတဦးဦးကို အလွန်ရင်းနှီးခင်တွယ်နေခြင်းမရှိစေရန် သတိထားပါ။
၆။ တက်ကြွစွာနေတတ်သော ကလေးငယ် ရုတ်တရက်ငေးမှိုင်နေလျှင် ဂရုတစိုက် မေးခွန်းမြောက်များစွာမေး၍ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသည်ကိုသိရအောင်လုပ်ပါ။
၇။ သားသမီးများကို လိင်နှင့်ပတ်သက်သော သိသင့်သိထိုက်သည့် ဗဟုသုတများကို သင်ကြားပေးပါ။ သင်မပြောပြပါက အခြားသူများ၏ မှားယွင်းသောအယူဝါဒများသွန်သင်ခြင်း ခံရမည်။
၈။ ကာတွန်း၊ စာအုပ်၊ ဗွီဒီယိုခွေများကို ကလေးငယ်များ မဖတ်မကြည့်ခင် မိမိအရင် ကြည့်၍ သူတို့ကြည့်ရန်သင့်မသင့် သိရအောင်လုပ်ပါ။
၉။ သင့်အိမ်ရဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို အရွယ်မရောက်သေးသူများမကြည့်ရသည့် (Parental Control) ထိန်းချုပ်စနစ်ထည့်ထားပါ။ အထူးသဖြင့် အိမ်ကို မကြာခဏ လာလည်တတ်သော ကလေးများ၏ မိဘများကို ထို့အတူပြုရန် အကြံပေးပါ။
၁၀။ ၃နှစ်အရွယ်မှစ၍ သူတို့၏ အတွင်းပိုင်း(private part)ကို သန့်ရှင်းးစင်ကျယ်စွာ ဆေးကျောတတ်အောင် သင်ကြားပေးပါ။ ထိုနေရာကို သင်အပါအဝင် အခြားမည်သူ့ကိုမျှ မထိမကိုင်စေသင့်ကြောင်းသွန်သင်ပါ။
၁၁။သင့်ကလေး၏ ဖြူစင်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အရာများကို (Blacklist) စာရင်းပြုစုထားပေးပါ။ (နားမထောင်သင့်သော သီချင်းများ၊ မကြည့်သင့်သော ဗွီဒီယိုခွေများနှင့် အတုယူမှားဖွယ် သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုဝင်များအပါအဝင်)
၁၂။လူထူထပ်သောနေရာများတွင် လူအုပ်ကြားမှ ခပ်ခွာခွာ ရှင်းလင်းစွာ နေသင့်ကြောင်း ရှင်းပြထားပါ။
၁၃။တဦးတယောက်၏ ကလေးငယ်အပေါ်မနှစ်မြို့ဖွယ်ပြုမူဆက်ဆံနေမှုကို တွေ့ရှိပါက (သို့) ကလေးငယ်ကတိုင်ကြားပါက ရေငုံနှုတ်ပိတ်မနေပါနှင့်။ သင်တားဆီးဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း ပြသပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသည် မိဘများနှင့် မိဘဖြစ်လာမည့်သူများသာဖြစ်သည်။
ကလေးဘဝ၏ စိတ်ဒဏ်ရာသည် တသက်လုံးနာကျင်စေသည်ကို မမေ့ပါနှင့်။
Author admin 1Posted on October 31, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on ကလေးသူငယ်များအား နှောင့်ယှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ မဖွယ်မရာပြုမူခံရခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်
ချောင်းခြောက် ဆိုးတဲ့အခါ ချွဲမထွက် သလိပ်မထွက် တာမို့ အလွန်အခံရခက်ပါတယ် ။
လည်ချောင်း နဲ့ နှာခေါင်းမှာ ဗိုင်းရပ်ပိုး ကူးစက် ၀င်ရောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ ။
ဖုံတွေ ဓါတ်မတဲ့ တဲ့ အမှုံအမွှား တွေနဲ့ တွေ့ ထိ တာကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
လည်ချောင်းထဲမှာ ကလိကလိ ယားပြီး အလွန်ပင်ပမ်းတဲ့ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်းကို
အိမ်တွင်းဆေးဝါးအသုံးပြုပြီး သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ နည်းလေးတွေ တင်ပြပါ့မယ် ။
ပျားရည်ဟာ အဏုဇီဝပိုးမွှားတွေကို နှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့ သတ္တိ ရှိပါတယ် ။
ဓါတ်တိုးခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပါတယ် ။
နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုကိုလည်း ပျောက်စေပါတယ် ။
ချွဲသလိပ်ပျော်စေပြီး လည်ချောင်းယားယံခြင်းကို သက်သာစေပါတယ် ။
ပူပူနွေးနွေး နွားနို့ ထဲကို ပျားရည် ထဲ့မွှေပြီး သောက်သုံးပေးရုံပါဘဲ ။
ချောင်းဆိုးရလွန်းလို့ ရင်ဘတ်အောင့်တာတွေပါ သက်သာစေပါတယ် ။
နနွင်းကို အ၀ါရောင်ဖြစ်စေတဲ့ ကာကူမင် ( curcumin ) ဓါတ်ဟာ ဗိုင်းရပ် ၊
ဘက်တီးရီးယား များကို နိုင်နင်းပါတယ် ။
ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်း သက်သာစေပါတယ် ။
နနွင်းမှုန့် လက်ဘက်ရည် ၁ ဇွန်း ကို စမုံစပါး ၁ ဇွန်းနှင့် ရော ၊ ရေနွေးဆူဆူထဲ့ ၊
ရေ တ၀က်ဘဲကျန်အောင် ကျို ၊ ပျားရည် အနည်းငယ်ထဲ့
တနေ့ ၃ ကြိမ် သောက်ရပါမယ် ။
နောက်တမျိုးက နွားနို့ နွေးနွေးတခွက်ထဲ နနွင်း တဇွန်း ထဲ့မွှေပြီး လည်း
ဂျင်းဟာ နာကျင်ခြင်းတွေကို ပျောက်စေပါတယ် ။
လည်ချောင်းယားခြင်းကို ပျောက်စေပါတယ် ။
ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေပါတယ် ။
ဂျင်းအနည်းငယ်ကို သေးသေးလေး တုံး၍ဖြစ်စေ ထုချေ၍ဖြစ်စေ
ခွက်တခုမှာထဲ့ပြီး ၊ ရေထဲ့၍ ပြုတ်ပါ ။ ဆူလျှင် အအေးခံပါ ။
ဂျင်းပြုတ်ရေကို တနေ့ ၃ ကြိမ်သောက်ပါ ။
ဂျင်းကို ပါးပါးလှီးပြီး ၀ါးစား၍လည်း ရပါတယ် ။
ကြက်သွန်ဖြူ ဟာ ဗိုင်းရပ်တွေ ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေ ကို နိုင်တဲ့သတ္တိ ရှိတဲ့
အလီစင် ( allicin ) ဓါတ် ပါဝင်ပါတယ် ။
ကြက်သွန်ဖြူဟာ ကိုယ်ခံအားစံနစ်ကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ် ။
ရေနွေးဆူဆူမှာ ထောင်းချေထားသော ကြက်သွန်ဖြူ နှင့် လေးညှင် အနည်းငယ် ထဲ့ပါ ။
အအေးခံပြီး ပျားရည် အနည်းငယ်ထဲ့၍ တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်ပေးရပါမယ် ။
Gargle Salt Water ဆားရေ နှင့် ပါးလုပ်ကျင်းခြင်း
ဆားရေဟာ လည်ချောင်းခြောက်ခြင်းကို စိုစွတ်စေပါတယ် ။
ချွဲ ပျော်စေပါတယ် ။
ဆား လက်ဘက်ရေ ၁ ဇွန်း ကို ရေနွေး တဖန်ခွက်မှာ ဖျော်ပါ ။
နဲနဲခြင်း ငုံ၍ ပါးလုပ်ကျင်းပါ ။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာကြာ ကျင်းလျှင်
ခံတွင်းထဲ ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ် ။
ရေနွေးဆူအောင် တည်ပြီး ယူကလစ်ဆီ ၂စက် ၃စက် ထဲ့ပါ ။
စောင် သို့မဟုတ် သဘက် ခြုံပြီး ခွက်မှထွက်သော ရေနွေးငွေ့ ကို ရှိုက်ရှု ပါ ။
တကြိမ်လျှင် ၅မိနစ် ၁၀မိနစ် ခန့် ၊ တနေ့ ၃ကြိမ် ရှုပါ ။
ချွဲသလိပ်တွေ ပျော်စေပါတယ် ။
Warm Milk and Honey နို့ နှင့် ပျားရည်
နွားနို့ ပူပူ တဖန်ခွက်မှာ ပျားရည် လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ထဲ့မွှေပါ ။
ည အိပ်ယာဝင် သောက်လျှင် အိပ်ပျော်စေသလို ၊ ပုံမှန်သောက်သုံးပါက
လည်ချောင်းရှင်းပြီး လည်ချောင်းယားယံ ခြင်း ပျောက်စေပါတယ် ။
လူတိုင်းလည်း သိနေမယ့် နည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။
မသိသေးရင်လည်း သိရအောင် ၊ သိပြီးရင်လည်း ဒီနည်းတွေကို
သူများ နိုင်ငံတွေမှာလည်း သုံးကြတဲ့အကြောင်းလေး သိရတော့
ပိုပြီး ယုံကြည်မိကြမယ် ထင်လို့ ပါ ။
Author admin 1Posted on October 31, 2017 October 31, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on #ချောင်းခြောက်ဆိုးတဲ့အခါ
*သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ၏ အစောဆုံး တွေ့ရများသော ရောဂါလက္ခဏာမှာ မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမမှန် သွေးဆင်းခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အများစုသည် အသက် ၃၀ ၊ ၄၀ ၀န်းကျင် အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များသည်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို အစောပိုင်းအဆင့်တွင် ရောဂါရှာဖွေနိုင်ပါက ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများသည်။ သားအိမ်ခေါင်းကို ပုံမှန် ရောဂါ စစ်ဆေးရှာဖွေခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါက ကင်ဆာမဖြစ်ခင် အခြေအနေကို သိနိုင်ပြီး ကင်ဆာ မဖြစ်ခင် ကုသမှု ပေးနိုင်ပေမည်။
သားအိမ်ခေါင်းသည် သားအိမ်၏ အောက်ဆုံးနားတွင် ရှိပြီး မွေးလမ်းကြောင်း (သို့) မိန်းမကိုယ် အပေါ်ပိုင်းသို့ အနည်းငယ် တိုးထွက်နေသည်။
သေးငယ်သော သားအိမ်ခေါင်းလမ်းကြောင်းသည် မွေးလမ်းကြောင်း နှင့် သားအိမ်တို့အကြား ရှိနေသည်။ သားအိမ်ခေါင်းလမ်းကြောင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိတ်နေလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ထိုသားအိမ်ခေါင်း လမ်းကြောင်းသည် ဓမ္မတာလာစဉ်အတွင်း သားအိမ်အတွင်းမှ သွေးစီးထွက်စေရန် နှင့် လိင်ဆက်ဆံမှုပြုသောအခါ သုတ်ကောင်များကို သားအိမ်အတွင်း ၀င်ရောက်စေရန် အခွင့်ပေးသည်။ ကလေးမွေးနေစဉ်အတွင်း ထိုသားအိမ်ခေါင်းလမ်းကြောင်းသည် အကျယ်ကြီး ပွင့်ထွက်လာသည်။ သားအ်ိမ်ခေါင်းမျက်နှာပြင်သည် အရေပြားဆဲလ်ကဲ့သို့သော ဆဲလ်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အကျိချွဲထုတ်လုပ်သော သေးငယ်သော ဂလင်းကလေးများသည်လည်း သားအိမ်ခေါင်းလမ်းကြောင်း နံရံတွင် ရှိသည်။
ကင်ဆာ ဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဆဲလ်များ၏ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို သေးငယ်သော ဆဲလ် သန်းပေါင်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်ထားသည်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ကွဲပြားသော ဆဲလ်အမျိုးအစား များစွာ ရှိပြီး အဆိုပါ ဆဲလ်အမျိုးအစားပေါင်းများစွာမှ ကင်ဆာအမျိုးအစားပေါင်းများစွာ ဖြစ်လာသည်။ ကင်ဆာ အမျိုးအစားအားလုံးတွင် တူညီသည်မှာ ကင်ဆာဆဲလ်များသည် ပုံမှန် မဟုတ်ဘဲ အထိန်းအချုပ် မရှိ ပွားများကြသည်။
ကင်ဆာသည် ကင်ဆာဆဲလ်များ ဆက်လက် ပြန့်ပွားနေသော တစ်သျှူးအစုအဝေး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကင်ဆာ သည် ဆက်လက် ကြီးထွားလာနေစဉ်အတွင်း အနီးနားရှိ တစ်သျှူးများ နှင့် အင်္ဂါများကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ကာ ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ထို့ပြင် ကင်ဆာ များသည် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အခြားအစိတ်အပိုင်းများထံသို့လည်း ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးသည် ကင်ဆာတစ်သျှူးမှ ဆဲလ်အချို့ ပြုတ်ထွက်ကာ သွေးကြော (သို့) သားငံရည်ကြောများမှတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အခြားနေရာများသို့ ရောက်ရှိသောအခါ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုရောက်ရှိသောနေရာသို့ ရောက်ရှိသော ကင်ဆာဆဲလ်အနည်းငယ်သည် ပျံ့ပွားခြင်းအားဖြင့် ကင်ဆာပျံ့နှံ့ခြင်း ဖြစ်လာသည်။ ထိုပျံ့နှံ့သော ကင်ဆာ ကျိတ်သည်လည်း ကြီးထွားလာပြီး အနီးနားရှိ တစ်သျှူးများသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ကာ ပျံ့နှံ့ခြင်းကို ထပ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အချို့ကင်ဆာများသည် အခြားကင်ဆာများထက် ပိုပြင်းထန်သည်။ အချို့ကင်ဆာများသည် အခြားကင်ဆာများထက် (စောစီးစွာ သိလျှင်) ကုသရ ပိုလွယ်သည်။ အချို့ ကင်ဆာများသည် အခြားကင်ဆာများထက် ရလဒ် ပိုကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် ကင်ဆာသည် အခြေအနေတစ်မျိုးတည်းကို မဆိုလိုချေ။ ကင်ဆာတိုင်းတွင် မည်သည့်ကင်ဆာ အမျိုးအစားဖြစ်ပေါ်လာသည်၊ အရွယ်မည်မျှ ကြီးသည် နှင့် မည်မျှအထိ ပျံ့နှံ့နေသည်တို့ကို အတိအကျ သိရန် အရေးကြီးသည်။ ထိုသို သိခြင်းဖြင့် ကုသမှု ဆိုင်ရာ နည်းလမ်း များနှင့် ရလဒ်တို့အပေါ် စိတ်ချနိုင်သော အချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ပေသည်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ သည် အဓိကအားဖြင့် နှစ်မျိုး နှစ်စား ရှိသည်။
– စကွေးမတ်ဆဲလ် သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ (squamous cell cervical cancer) သည် အဖြစ်အများဆုံး ဖြစ်သည်။ ထိုကင်ဆာသည် သားအိမ်ခေါင်းကို အုပ်ထားသော အရေပြား ဆဲလ်ကဲ့သို့သော ဆဲလ်များမှ ဖြစ်လာသည်။
– ဂလန်းငယ်များမှ ဖြစ်သော သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ (adenocarcinoma cervical cancer) သည် အတွေ့ရနည်းသည်။ သားအိမ်ခေါင်း လမ်းကြောင်းအတွင်းရှိ အကျိချွဲထုတ် ဆဲလ်ငယ်တစ်ခုမှ ကင်ဆာ ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးလုံကို ရောဂါရှာဖွေခြင်း နှင့် ကုသခြင်းနည်းလမ်းများသည် များသောအားဖြင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။
အများစုသည် ၃၀ ကျော်၊ ၄၀ ကျော် အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များသည်။ အချို့ အခြေအနေများတွင်မူ ပိုအသက်ကြီးသော အမျိုးသမီးများ နှင့် ပိုငယ်သော အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်နိုင်သည်။ အသက် ၂၅ နှစ်အောက် ငယ်သော အမျိုးသမီးများတွင်မူ အဖြစ်နည်းသည်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသည် အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်ပွားသော ကင်ဆာများတွင် အဆင့် ၁၂ ခန့် နေရာတွင် ရှိနေသည်။ မကြားသေးမီ နှစ်များအတွင်း သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အသစ်တွေ့ရှိရမှုများ လျော့ကျလာသည်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို ပုံမှန် သားအိမ်ခေါင်းကို စစ်ဆေးရှာဖွေခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးများကို ပုံမှန် သားအိမ်ခေါင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်အတွက် အကြံပြုလေ့ရှိသည်။ စစ်ဆေးမှုအတွင်း သားအိမ်ခေါင်းမှ ယူသော နမူနာကို အရည်တစ်ချို့အတွင်းထည့်ပြီး စမ်းသပ်ရန်အတွက် ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပိုပေးသည်။ ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် မလိုသောဆဲလ်များဖြစ်သည် သွေးဆဲလ်များနှင့် အကျိချွဲများ ဖယ်ထုတ်ရန် အဆိုပါအရည် လှည့်ပစ်သည်။ ထို့နောက် သားအိမ်ခေါင်းမှ ဆဲလ်များကုို ဆလိုက်ပြားပေါ်တွင် တင်ပြီး အနုကြည့် မှန်ဘီလူးအောက်တွင် စမ်းသပ်သည်။ အချို့လူများတွင် နမူနာတစ်ခုထဲမှပင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်စေသော အိတ်ခ်ျပီဗွီ ဗိုင်းရပ် (Human Papilloma Virus – HPV) တစ်မျိုးကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
ဒစ် ကရိုးဆစ် (Dyskarosis) သည် ဆေးပညာ ဆိုင်ရာ အခေါ်အဝေါ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး သားအိမ်ခေါင်း စစ်ဆေးမှုများတွင် ပုံမမှန် ဆဲလ်ပြောင်းလဲမှုများကို ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် ကင်ဆာကို ဆိုလိုသည် မဟုတ်ပေ။ ပုံမမှန် ဆဲလ်များကို ကင်ဆာ မဖြစ်ခင် ဆဲလ်များဟု ခေါ်လေ့ရှိသည်။ ဆဲလ် ပုံမမှန် ဖြစ်မှု အဆင့်ပေါ် မူတည်၍ သားအိမ်ခေါင်းဆဲလ်ပုံမမှန် ပြောင်းလဲမှုကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားနိုင်သည်။
– ဆဲလ် ပုံမမှန် ဖြစ်မှု အပျော့စား (Mild Dyskaryosis) – ဆဲလ်ပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ် ရှိခြင်းကိုသာ ဆိုလိုသည်။ စီအိုင်အင် ၀မ်း (CIN 1) ဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။
– အလယ်အလတ် ဆဲလ်ပြောင်းလဲမှု (Moderate Dyskaryosis or CIN 2)
– ပြင်းထန် ဆဲလ်ပြောင်းလဲမှု (Severe Dyskaryosis or CIN 2) – ဤအသုံးအနှုန်းသည် အလွန်ပုံမမှန်မှုကို ဖော်ပြသော်လည်း ကင်ဆာဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုသေးချေ။
အများစုတွင် ပုံမမှန် ဆဲလ်များသည် ကင်ဆာအဖြစ်သို့ မရောက်ရှိပေ။ အချို့တွင်မူ ပုံမှန် ဆဲလ်အဖြစ်သို့ ပြန်ပြောင်းရောက်ရှိသည်။ သို့သော် အနည်းငယ်ခန့်တွင်သာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပြီးနောက် ကင်ဆာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရောက်ရှိသည်။
မသေချာသော ပြောင်းလဲမှု (Borderline change) တွေ့ပါက နောက်လအနည်းငယ်အကြာ သားအိမ်ခေါင်းကို နောက်တစ်ခါ ထပ်မံစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။ အများစုတွင် အနည်းငယ် ပုံမမှန် ဖြစ်သော ဆဲလ် များသည် လအနည်းငယ်အတွင်း ပုံမှန်အဖြစ်သို့ ပြန်ရောက်နိုင်သည်။ ပုံမမှန်မှု ဆက်ရှိနေလျှင် ကုသမှုခံယူရန် အကြံပြုလေ့ရှိသည်။ ပြင်းထန် ပုံမမှန်မှု ရှိသောအမျိုးသမီးများတွင် ကုသမှုသည် သားငယ်ခေါင်းကင်ဆာမဖြစ်ခင် ပုံမမှန် ဆဲလ်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
သို့သော် သိထားရမည်မှာ ဆရာဝန် အကြံပြုချက်အတိုင်း သားအိမ်ခေါင်းကို ပုံမှန်စစ်ဆေးစမ်းသပ်ပြီး ပုံမမှန်ဆဲလ်များတွေ့လျှင် ကုသမှု ခံယူပါက သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ အလွန်နည်းသည်။
ကင်ဆာ အလုံးတစ်ခုသည် ဆဲလ်တစ်ခုမှ အစပြုသည်။ ဆဲလ်အတွင်းရှိ မျိုးရိုးဗီဇအချို့ကို တစ်စုံတစ်ခုက ထိခိုက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်စေသည်ဟု ထင်ကြသည်။ ထိုအရာက ဆဲလ်များကို ပုံမမှန် ဖြစ်စေကာ အထိန်းအချုပ် မရှိ ပွားများကြသည်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတွင်မူ အထက်တွင် ရှင်းပြခဲ့သည်အတိုင်း ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆဲလ်တစ်ခုမှ စတင် ဖြစ်ပွားသည်။ အများစုတွင် ပုံမမှန်ဆဲလ်များသည် ကင်ဆာအဖြစ် မပြောင်းလဲခင်တိုင်အောင် နှစ်များစွာ ကြာသည်အထိ ပုံမမှန် ဆဲလ်အဖြစ်တည်ရှိနေသည်။ သားအိမ်ခေါင်း ဆဲလ်များ ကင်ဆာ မဖြစ်ခင် ပုံမမှန် ပြောင်းလဲမှုသည် ယခင် အိတ်ခ်ျပီဗွီ ဗိုင်းရပ်ပိုး ကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
အိတ်ခ်ျပီဗွီ ဗိုင်းရပ် Humam Papilloma Virus (HPV) နှင့် သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ
အိတ်ခ်ျပီဗွီ ဗိုင်းရပ် မျိုးကွဲပေါင်းများစွာ ရှိသည်။ မျိုးကွဲ၁၆ နှင့် ၁၈ သည် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုများတွင် အများဆုံး ပါဝင်သည်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားသော အိတ်ခ်ျပီဗွီ ပိုး မျိုးကွဲများသည် ရောဂါရှိသော လူနှင့် လိင်ဆက်ဆံရာမှတဆင့် ကူးစက်သည်။ ဤပိုးမျိုးကွဲများ ကူးစက်ခံရသူအနေဖြင့် မည်သည့်လက္ခဏာမျှ မပြချေ။ ထို့ကြောင့် အတူတူ လိင်ဆက်ဆံသူတွင် အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲ ကူးစက်ခံရမှု ရှိ၊ မရှိ မသိနိုင်ပေ။
အချို့အမျိုးသမီးများတွင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်စေသော အိတ်ခ်ျပီဗွီ မျိုးကွဲများသည် သားအိမ်ခေါင်းရှိ ဆဲလ်များအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိသည်။ ထိုအခါ ဆဲလ်များကို ပုံမမှန် ဖြစ်စေပြီး ထိုဆဲလ်များက နောက်ပိုင်းတွင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်စေသည်။ (မှတ်ချက် ။ ။ နှစ်နှစ်အတွင်း အိတ်ခ်ျပီဗွီ ဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံရသူ ၁၀ ယောက်တွင် ၉ယောက်သည် လုံးဝအရှင်းပျောက်ကင်းသွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကူးစက်ခံရသူအမျိုးသမီးစုသည် ကင်ဆာ မဖြစ်ချေ။)
အိတ်ခ်ျပီဗွီ ဗိုင်းရပ် ကာကွယ်ဆေးကို သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် အချို့နိုင်ငံများတွင် မိန်းကလေးများ အသက် ၁၂ နှစ် ပြည့်သည့်အခါ ထိုးကြသည်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို ကာကွယ်ရာတွင် အလွန်အကျိုးရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုကာကွယ်ဆေးသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထက် အရွယ်ငယ် လိင်ဆက်ဆံမှု မပြုခင် စတင်ထိုးနှံလျှင် ပိုအကျိုးရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားပြီးသည့်တိုင် သားအိမ်ခေါင်း စစ်ဆေးမှု ခံယူခြင်းကို ဆက်လုပ်ရမည်။ အကြောင်းမှာ ကာကွယ်ဆေးသည် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း မကာကွယ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုကို မြင့်စေနိုင်သောအခြားအကြောင်းရင်းများမှာ အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။
– ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း – ဆေးလိပ်အတွင်းမှ ဓါတုပစ္စည်းများသည် သွေးစီးကြောင်းမှတဆင့် သယ်ဆောင်ကာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဆဲလ်များကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ ဆေးလိပ်သောက်သူအမျိုးသမီးများသည် ဆေးလိပ်မသောက်သူများထက် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ နှစ်ဆ များသည်။ အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ်သောက်သူအမျိုးသမီး တစ်ယောက်သည် အိတ်ခ်ျပီဗွီ ဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံရပါက ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုမြင့်တက်လာသည်။
– ခုခံအား စနစ် အားနည်းခြင်း – ဥပမာ ခုခံအား ကျဆင်းမှု ရောဂါ ရှိသူများ၊ ခုခံအား ဖိနှိပ်ထားသော ဆေးသောက်သုံးသူများတွင် ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်သည်။ အကြောင်းမှာ ခုံခံအား စနစ်မကောင်းပါက အိတ်ခ်ျပီဗွီ ဗိုင်းရပ် ကူးစက်မှုကို ခုံခံ တုန့်ပြန်နိုင်မှု မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
– ကိုယ်ဝန်တားဆေးများကို ရှစ်နှစ်ကျော် သောက်သုံးပါကလည်း သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်မှု အနည်းငယ် မြင့်တက်နိုင်သည်။
ကင်ဆာ အလုံးသေးငယ်စဉ်အတွင်း အစတွင် မည်သည့်လက္ခဏာ ပြမည်မဟုတ်ချေ။ ကင်ဆာအလုံး ကြီးလာသည်နှင့် အမျှ အများစုတွင် ဖြစ်သော လက္ခဏာမှာ မိန်းမကိုယ်မှ သွေးဆင်းခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
– ပုံမှန် ဓမ္မတာ လာချိန် တစ်ခု နှင့် တစ်ခုအကြားတွင် သွေးဆင်းခြင်း
– လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် သွေးဆင်းခြင်း
– သွေးဆုံးပြီးသော အမျိုးသမီးများတွင် မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန် မဟုတ်သော သွေးဆင်းခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်သည်။
အချို့အမျိုးသမီးများတွင် အစောပိုင်းလက္ခဏာမှာ အနံ့ရှိသောအရည်များ မိန်းမကိုယ်မှ ဆင်းခြင်း နှင့် လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် နေရခက်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာများသည် အခြားရောဂါ အခြေအနေများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် အဆိုပါ လက္ခဏာများ ပေါ်လာပါက ဆရာဝန် နှင့် ပြသတိုင်ပင်သင့်သည်။
ထို့ပြင် ကင်ဆာ ဆဲလ်များသည် အခြား ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများသို့ ပြန့်နှံ့ပါကလည်း အခြားရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်နိုင်သည်။
သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုကို သေချာစေရန်
အမျိုးသမီး တစ်ယောက်သည် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဟုထင်ရသော လက္ခဏာများ ရှိပါက ဆရာဝန်သည် သူမ၏ မိန်းမကိုယ် မွေးလမ်းကြောင်းကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်သည် သားအိမ်ခေါင်းတွင် ပုံမှန် မဟုတ်ခြင်းကို စမ်းမိပေလိမ့်မည်။ ထို့နောက် ဆရာဝန်က သားအိမ်ခေါင်းကို ကြည့်ရန် စပက်ကူလမ် (speculum) ဟု ခေါ်သော မိန်းမကိုယ်တွင်းထည့် ပစ္စည်း ထည့်ကာ စမ်းပေလိမ့်မည်။ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ရှိသည်ဟု သံသယ ရှိပါက သားအိမ်ခေါင်းကြည့် မှန်ပြောင်းဖြင့် စစ်ဆေးရန် လွှဲပို့ပေလိမ့်မည်။
သားအိမ်ခေါင်းကြည့် မှန်ပြောင်း ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းသည် သားအိမ်ခေါင်းကို ပို အသေးစိတ် ကျကျ စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစစ်ဆေးမှုအတွက် သားအိမ်ခေါင်းကို မြင်နိုင်ရန် မိန်းမကိုယ် မွေးလမ်းကြောင်းသို့ စပက်ကူလမ်ကို ထည့်ရသည်။ ထို့နောက် ဆရာဝန်က မှန်ဘီလူးကို သုံးကာ သားအိမ်ခေါင်းကို ပိုအသေးစိတ်ကျကျ အဆချဲ့ကြည့်ရှုသည်။ စစ်ဆေးမှုသည် ၁၅ မိနစ်ခန့် ကြာနိုင်သည်။ သားအိမ်ခေါင်းဖြင့် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးစဉ်အတွင်း သားအိမ်ခေါင်းမှ အသားစငယ် တစ်ခုကို ယူလေ့ရှိသည်။ ထိုအသားစငယ်ကို အနုကြည့် မှန်ဘီလူးအောက်တွင် ကင်ဆာဆဲလ် ရှိ မရှိ ရှာဖွေ စစ်ဆေးလေ့ရှိသည်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ရှိသည် ဟု သိရပါက ကင်ဆာ၏ ပြန့်နှံ့မှုကို သိရှိရန် အခြား စမ်းသပ်မှုများကို လုပ်ရန် အကြံပေးလေ့ရှိသည်။ ဥပမာ ကွန်ပြူတာ ဓါတ်မှန်၊ သံလိုက်ဓါတ်မှန်၊ ရင်ဘတ် ဓါတ်မှန် ၊ အာထရာဆောင်း ၊ သွေး စစ်မှုများ နှင့် အခြား စစ်ဆေးမှုများ။ ထိုသို့ စစ်ဆေးခြင်းကို ကင်ဆာ အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ဟု ခေါ်သည်။ ကင်ဆာ အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ –
– ကင်ဆာသည် အူထဲတွင် မည်မျှရှိသည်၊ ကင်ဆာသည် အူနံရံကို အနည်းငယ် သို့ အပြည့်အ၀ ဖြတ်ကျော်ကြီးထွားနေသည်ကို ရှာဖွေရန်
– ကင်ဆာသည် ၀န်းကျင်ရှိ ပြန်ရည်ကျိတ်များသို့ ပျံ့နှံ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိ သိရှိရန်။
– ကင်ဆာသည် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အခြားနေရာများသို့ ပျံ့နှံ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို သိရှိရန် တို့ဖြစ်သည်။
မည်သည့် စစ်ဆေးမှု လိုအပ်သည်မှာ ဦးစွာ စစ်ဆေးမှု များ နှင့် အသားစ အဖြေတို့ အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အသားစအဖြေတွင် ကင်ဆာသည် အစောပိုင်း အဆင့်သာ ဖြစ်ပြီး သားအိမ်ခေါင်း၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သာ ရှိသေးလျှင် အခြားနေရာသို့ ပြန့်နှံ့နိုင်ရန် နည်းပြီး အခြားစစ်ဆေးမှု အများကြီး လိုအပ်မည် မဟုတ်ချေ။ သို့သော် ကင်ဆာသည် ပိုမို အဆင့်မြင့်နေပြီး ပြန့်နှံ့နိုင်ပါက အခြား စစ်ဆေးမှုများ လုပ်ရန် လိုပေလိမ့်မည်။
ကင်ဆာအဆင့်ကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် မည်သည့်ကုသမှုသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကို ဆရာဝန်ကို အကြံဖြစ်စေသည်။ ထို့ပြင် ကင်ဆာရောဂါ၏ ဖြစ်နိုင်သော ရလဒ်ကိုလည်း သိနိုင်သည်။
ကုသမှုနည်းလမ်းများတွင် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသခြင်း နှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအတွက် ကုသမှုကို အကြံပေးရာတွင် ကင်ဆာ အဆင့် နှင့် အထွေထွေ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ၊ ကလေးယူရန် အစီအစဉ် စသော အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ရောဂါ အခြေအနေကို သိသော အထူးကု ဆရာဝန်နှင့် ရောဂါ အခြေအနေကို သေချာဆွေးနွေးသင့်သည်။ သူတို့သည် သင့်ကို ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများကို ရှင်းပြပေးနိုင်သည်။ ဥပမာ – ကုသမှု အောင်မြင်နိုင်မှု ၊ ဖြစ်နိုင်သော ဆိုးကျိုး၊ သင့်ကင်ဆာရောဂါ အမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်သော ကုသမှု ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် အမျိုးမျိုးတို့အကြောင့် အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးနိုင်သည်။
အထူးကုနှင့် ကုသမှု၏ ရည်မှန်းချက်ကိုလည်း ဆွေးနွေးသင့်သည်။ ဥပမာ-
-ကုသမှု ရည်ရွယ်ချက်မှာ အများစုတွင် ကင်ဆာရောဂါ ပျောက်ကင်းရန် ဖြစ်သည်။ တိတိကျကျပြောရလျှင် ကင်ဆာ ရောဂါ အဆင့်စောလေလေ၊ ကုသရန် ပျောက်ကင်းနိုင်မှု များလေလေ ဖြစ်သည်။ (ဆရာဝန်များသည် ပျောက်ကင်းခြင်း အစား ရောဂါ ငုတ်သွားခြင်း ဟု သာ သုံးလိုကြသည်။ ရောဂါငုတ်သွားခြင်းမှာ ကုသပြီးနောက် ကင်ဆာရောဂါနှင့် ပတ်သက်သောအထောက်အထား မရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် ရောဂါ ငုတ်သွားလျှင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပေသည်။ သို့သော် အချို့လူများတွင် ကင်ဆာသည် လပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမှ ပြန်ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်များသည် ကုသပျောက်ကင်းသည် ဟူသော စကားကို သုံးရန် တွန့်ရွံ့ကြသည်။)
– ကုသမှုသည် ကင်ဆာကို ထိန်းချုပ်ရန် ရည်ရွယ်နိုင်သည်။ ကုသပျောက်ကင်းရန် လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်လျှင် ကုသမှုဖြင့် ကင်ဆာ၏ ကြီးထွားမှုနှင့် ပျံ့နှံ့မှုတို့ကို တားနိုင်သောကြောင့် ကင်ဆာသည် ပို၍ ဖြည်းစွာသာ ရှေ့တိုးနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုခြင်းဖြင့် သင့်ကို ကင်ဆာရောဂါ လက္ခဏာများ ကင်းစေရန် အချိန်အတန်ကြာ ထိန်းထားနိုင်ပေသည်။
-ကုသမှုသည် အချို့လူများတွင် ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ပျောက်ကင်းအောင် မကုသနိုင်လျှင်တောင် ကုသမှုသည် ကင်ဆာ၏ အရွယ်ကို သေးငယ်စေနိုင်ပြီး နာကျင်မှု လက္ခဏာများကို သက်သာစေနိုင်သည်။ အချို့ကုသမှုများသည် ကင်ဆာ၏ အရွယ်ကို လျော့ချပေးပြီး နာကျင်ခြင်း၊ အစာမျိုရန် ခက်ခဲခြင်း စသော ရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာစေသည်။
သားအိမ်ခေါင်း အပါအ၀င် သားအိမ် တစ်ခုလုံးကို ဖြတ်ထုတ်ကုသခြင်းသည် ပြုလုပ်မှုများသော ခွဲစိတ်မှု ဖြစ်သည်။ ကင်ဆာသည် အစောပိုင်းအဆင့်တွင်သာ ရှိပြီး အခြား နေရာများသို့ မပြန့်သေးပါက ခွဲစိတ်မှု တစ်ခုတည်းကပင် ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။ အချို့ ကင်ဆာ အဆင့် အလွန်စောသော အခြေအနေများတွင် သားအိမ်တစ်ခုလုံးကို ထုတ်စရာမလိုပဲ ဖြစ်ပွားသော သားအိမ်ခေါင်း အစိတ်အပိုင်းလေးကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့သို့သော သူများတွင် ကလေးကို မွေးနိုင်သော အခွင့်လည်း ရှိသည်။
ကင်ဆာသည် ခန္ဓာကုိုယ် အခြား နေရာများသို့ ပြန့်နှံ့သွားပါက အခြားကုသမှုများအပြင် ခွဲစိတ်မှုကို လုပ်ရန် အကြံပြုသေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အချို့လူများတွင် ကင်ဆာသည် အနီးနား အင်္ဂါများကို ပြန့်နှံ့သွားပါက ပို ကြီးသော ခွဲစိတ်မှုကို လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့သော ခွဲစိတ်မှုတွင် သားအိမ် နှင့် သားအိမ်ခေါင်းကို ထုတ်ရုံသာမက ကင်ဆာ ပြန့်နှံ့သော ဆီးအိမ် ၊ အူ စသည်တို့ကို ဖြတ်တောက် ဖယ်ရှားရန် လိုသည်။
ကင်ဆာသည် အဆင့် နောက်ကျကာ မကုသနိုင်လျှင် တောင်မှ အချို့ ခွဲစိတ်မှု နည်းလမ်းများသည် ရောဂါဝေဒနာများကို သက်သာစေရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။ ဥပမာ ကင်ဆာပြန့်နှံ့မှုကြောင့် အူပိတ်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်းကို သက်သာစေရန်
ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသခြင်းဆိုသည်မှာ ကင်ဆာတစ်သျှူးမျာပေါ်သို့ စုစည်းထားသော စွမ်းအားမြင့် ဓါတ်ရောင်စဉ်တန်းများကို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့ လုပ်ခြင်းက ကင်ဆာဆဲလ်များကို သတ်နိုင်သည်။ (သို့) ကင်ဆာဆဲလ်များ ပွားများခြင်းကို သတ်နိုင်သည်။
အစောပိုင်း သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ အဆင့်တွင် ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသခြင်းပင် လုံလောက်နိုင်ပြီး မခွဲစိတ်လိုလျှင် အခြားနည်းလမ်း တစ်ခုအဖြစ် ရွေးချယ် ကုသနိုင်သည်။ ပိုမို အဆင့် နောက်ကျသော ကင်ဆာများအတွက် ဓါတ်ကင်ခြင်းကို အခြားကုသမှုများနှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။
သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာကို ကုသရန် အတွက် ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းတွင် နည်းလမ်း နှစ်မျိုးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အပြင်မှ ဓါတ်ရောင်ခြည် ပေးခြင်း နှင့် အတွင်းမှ ဓါတ်ရောင်ခြည် ထုတ်လွှတ်စေခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ အများစုတွင် နည်းလမ်း နှစ်မျိုးစလုံး အသုံးပြုသည်။
– ပြင်ပမှ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်း (external brachytherapy) – ဓါတ်ရောင်ခြည်များကို ပြင်ပရှိ စက်တစ်ခုမှ ကင်ဆာအကျိတ်ပေါ်သို့ စူးစည်းကျရောက်စေသည်။ ကင်ဆာအမျိုးအစားအများစုတွင် ဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။
– အတွင်းမှ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်း (Brachytherapy) – ဤနည်းလမ်းတွင် ဓါတ်ရောင်ခြည်ကြွသော ပစ္စည်းငယ်လေးကို ကင်ဆာတစ်သျှူးများဘေးတွင် အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ထည့်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကင်ဆာသည် အဆင့် နောက်ကျ၍ လွန်ပြီး ကုသ၍ မရနိုင်လျှင်တောင်မှ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းဖြင့် ခံစားရသော ဝေဒနာများကို သက်သာစေနိုင်သည်။ ဥပမာ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အခြားနေရာများသို့ ပျံ့နှံ့ကာ နာကျင်မှုကို ဖြစ်ပွားစေသော ကင်ဆာများကို ကျုံ့သွားစေနိုင်သည်။
ကင်ဆာဆေးသွင်း ကုသခြင်း ဆိုသည်မှာ ကင်ဆာ ဆဲလ်များကို သတ်နိုင်သော (သို့) ၎င်းတို့ ပွားများခြင်းကို တားနိုင်သော ဆေးများဖြင့် ကင်ဆာကို ကုသခြင်း ဖြစ်သည်။ ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသခြင်းကို အချို့ အခြေအနေများတွင် ဓါတ်ရောင်ခြည်ပြခြင်း (သို့) ခွဲစိတ်ခြင်း နှင့် ပေါင်းစပ်ကုသသည်။
ကုသမှု ရလဒ်တွင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသည် သားအိမ်ခေါင်းတွင်သာ ရှိနေပြီး အခြားနေရာများသို့ ပျံ့နှံ့ခြင်း မရှိသေးပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤသို့သော အခြေအနေတွင် ကုသပါက အမျိုးသမီး ဆယ်ယောက်တွင် ကိုးယောက်သည် ကုသ ပျောက်ကင်းနိုင်သည်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသည် အခြားနေရာများသို့ ပျံ့နှံ့နေပါက ကုသပျောက်ကင်းနိုင်သော်လည်း အခွင့်အလမ်းနည်းသည်။ ကုသ မပျောက်ကင်းနိုင်လျှင်တောင်မှ ကုသမှုသည် ကင်ဆာ တိုးတက်ဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ချပေးနိုင်သည်။
ကင်ဆာ ကုသမှုသည် ဆေးပညာ၏ တိုးတက်နေသော နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုသမှု အသစ်များလည်း ဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေပြီး ရလဒ်အပေါ် သတင်းအချက် များသည်လည်း အလွန်ယေဘူယျ ကျသည်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားပါက ရောဂါ အကြောင်းကို သိသော အထူးကုဆရာဝန်က ရောဂါ၏ ရလဒ်နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို ရှင်းပြနိုင်ပေသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များမှာ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ဆေးဝါးကုသ ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် မဟုတ်ပဲ မိမိတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသောရောဂါအခြေအနေ များကို စောလျင်စွာ သတိထားမိစေရန် နှင့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ တိုးပွားစေရန်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ဆေးဝါးကုသခြင်းများကိုမူ တတ်သိကျွမ်းကျင်သော ဆရာဝန်များနှင့်သာ တိုင်ပင်ပြသ၍ ကုသမှုခံယူသင့် ပါသည်
#CREDIT – Myanmar Health Centre
Author admin 1Posted on October 31, 2017 October 31, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on သားအိမ်ခေါင်းဆိုတာဘာလဲ?
​ဘုရင့်နောင် KBZ ဘဏ်ခွဲအနီးတွင် ကုမ္ပဏီပိုင် ငွေများတင်ထားသည့်ကားကို မောင်းပြေးသွားသည့် ယာဉ်မောင်းကို မိပြီ
အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁နာရီခန့်အချိန်က ဘုရင့်နောင် KBZ ဘဏ်ခွဲမှာ ငွေလာထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ငွေ ကျပ်သိန်း ၁၄၁၄ သိန်းကျော်တင်ဆောင်ထားတဲ့ကားကို ငွေရောကားပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ကုမ္ပဏီယာဉ်မောင်း ကျော်ဇင်ဦး ကို ဒီကနေ့ မနက်မှာ ဖမ်းဆီးရမိလိုက်ပြီလို့ ဘုရင့်နောင်နယ်မြေရဲစခန်းက ပေါ်ပြူလာနယူးစ်ကိုပြောပါတယ်။
“တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်တာပါ။ အသေးစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ သူတို့ကပိုပြောနိုင်မယ်” လို့ ဘုရင့်နောင်နယ်မြေရဲစခန်းရဲ့တာဝန်ကျတာဝန်မှူးကပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ မနက် ၃ နာရီလောက်ကလှိုင်သာယာမြို့နယ်ထဲမှာ ဖမ်းဆီးရမိလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
သူယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ငွေတွေအနက် အချို့ကိုလဲ ပြန်လည်ရရှိပြီလို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေတွေကိုယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ကိုကျော်ဇင်ဦးကို ဘုရင့်နောင်နယ်မြေရဲစခန်းမှာ (ပ)၁၁၂၉/၂၀၁၇၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ (၃၈၁) နဲ့ ကုမ္ပဏီကနေ အမှုဖွင့်အရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစာ – ကျော်ဇင်ဦး မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားသည့်ကားအား အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့ညပိုင်းတွင် ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့စဉ်က(ဓာတ်ပုံ – ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့)
Author admin 1Posted on October 31, 2017 October 31, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​ဘုရင့်နောင် KBZ ဘဏ်ခွဲအနီးတွင် ကုမ္ပဏီပိုင် ငွေများတင်ထားသည့်ကားကို မောင်းပြေးသွားသည့် ယာဉ်မောင်းကို မိပြီ